Paying Taxes | Myanmar Doing Business
ညွှန်းကိန်း – အခွန်ပေးဆောင်ခြင်း
၂၀၁၉ ခုနှစ် အဆင့် -၁၂၆
၂၀၁၉ ခုနှစ် ပန်းတိုင်မှ ဝေးကွာမှု ရမှတ်*: ၆၃.၉၄ (၂၀၁၈ ခုနှစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် လွယ်ကူမှု၏ ရမှတ်နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။)
ဒေသတွင်းပျမ်းမျှ ရမှတ် (အရှေ့အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသ) : ၇၂.၉၈
အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းညွှန်းကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစိတ်ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
* ပန်းတိုင်မှဝေးကွာမှုရမှတ် (DTF) သည် နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီက “ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံ (frontier)”နှင့် မည်မျှဝေးကွာနေသည်ကို ဖော်ပြသည်။ ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံဆိုသည်မှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစတင်သည့် Doing Business ညွှန်းကိန်းအားလုံးတွင် အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် ပြသနိုင်သည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ပန်းတိုင်မှဝေးကွာမှုသည် ၀ မှ ၁၀၀ အထိဖြစ်နိုင်ပြီး၊ ၀ သည် စွမ်းဆောင်ရည်အနိမ့်ဆုံးကိုလည်းကောင်း၊ ၁၀၀ သည်ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံကိုလည်းကောင်းကိုယ်စားပြုသည်။ စီးပွားရေး လုပ်ရန် လွယ်ကူမှုညွှန်းကိန်းအဆင့်သည် ၁ မှ ၁၉၀ အတွင်းဖြစ်သည်။ (ဇာစ်မြစ်-ကမ္ဘာ့ဘဏ်)
လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် အခွန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်အညီ အခွန်ပေးဆောင်မှုများ၊ အခွန်ပေးရသည့် အချိန်နှင့် အခွန်နှုန်းတို့အပြင် ကြေညာလွှာတင်ပြီးနောက်ပိုင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ
အခွန်များသည် တည်ငြိမ်၍ တန်းတူမျှတသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်က အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လူတိုင်းက ပေးဆောင်ရသော စျေးနှုန်းပင်ဖြစ်သည် -
လူမှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်များနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း
သို့ရာတွင် အခွန်နှုန်များနှင့် အလုပ်ဝန်ထုပ်ဖြစ်စေသော အခွန်စီမံခန့်ခွဲရေးတို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အဓိကအတားအဆီးများဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည် ။
အခွန်ထမ်းများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကိုအားပေးသည့် အခွန်လိုက်နာထမ်းဆောင်မှုစနစ်များဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် အတွက် စိန်ခေါ်မှုများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
Paying Taxes in Myanmar
အခွန် (သို့မဟုတ်) ထည့်ဝင်ငွေ ပေးဆောင်ခြင်း (ကြိမ်နှုန်း) ကြာမြင့်ချိန် (နာရီ) အခွန်နှုန်း အခွန်အခြေ အခွန်အားလုံး၏ အခွန်နှုန်းနှင့် ထည့်ဝင်ငွေနှုန်း ( အသားတင်အမြတ်၏ ရာခိုင်နှုန်း)
ဝင်ငွေခွန် ၄ ၆၄ ၂၅% (၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍) အခွန်ကျသင့်သော ဝင်ငွေ ၂၆..၂၈
ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းခြင်းအပေါ် ကျသင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၁ ၄% ဝယ်ယူသည့်တန်ဖိုး ၂.၄၂
ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းခွန် ၁ ၁၃% မြေနှင့်အဆောက်အဉီး ၁.၇၅
အခြေပစ္စည်းမှ မြတ်စွန်းငွေအပေါ် ကောက်ခံသည့်အခွန် ၁ အသားတင်အမြတ် အပေါ်၁၀% အခြေပစ္စည်းမှ မြတ်စွန်းငွေ ၀.၅၁
အလုပ်ရှင်မှ ထည့်ဝင်ရသော လူမှုဖူလုံရေးထည့်ဝင်ငွေ ၁၂ ၁၁၁ ၂% လစာဝင်ငွေ ၀.၂၆
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၁၂ ၁၀၂ ၅.၀% ဝန်ဆောင်မှုရငွေ ၊ ရောင်းရငွေ ၊ ထုတ်လုပ်မှုရငွေ ၀.၀
Employee paid social security contributions (jointly) ၀ ၃% ၀.၀
အလုပ်ရှင်မှ ထည့်ဝင်ရသော လူမှုဖူလုံရေးထည့်ဝင်ငွေ(အလုပ်ရှင်ထည့်ဝင်ငွေနှင့် တစ်ပါတည်းပူးပေါင်း၍ ထည့်ဝင်ရသည်။) ၀
စုစုပေါင် ၄၃ ၂၈၂ ၃၁.၂၂
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် လွယ်ကူမှု အစီရင်ခံစာတွင် ရရှိခဲ့သော ရမှတ်များ
ကြေညာလွှာတင်ပြီးနောက်ပိုင်း တိုင်းတာချက်အညွှန်း (၀-၁၀၀) ၄၅.၅၄
တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် ရှိပါသလား? ရှိပါသည်။
စစ်တမ်းကောက်ယူသော မေးခွန်းများတွင် ပါရှိသော လုပ်ငန်းအား တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် ပြန်အမ်းငွေ ပေးနိုင်ပါသလား? မပေးနိုင်ပါ။
တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် ပြန်အမ်းငွေများပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များရှိိ ပါသလား? မတည်ရင်းနှီးငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်း အပေါ် ပေးဆောင်ရသည့် အခွန်အား ပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါ။
တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် အခွန်စာရင်း စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ရာခိုင်နှုန်း (%) မတတ်နိုင်သေးပါ။
အခွန်ကိုဆက်လက်သယ်ယူသွားနိုင်သည့် သတ်မှတ်ကာလရှိပါသလား? မရှိပါ။
တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် ပြန်အမ်းငွေ တောင်းခံရန် ကြာချိန် (နာရီ) စစ်တမ်းကောက်ယူသော မေးခွန်းများတွင် ပါရှိသော လုပ်ငန်းအား တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် ပြန်အမ်းငွေ ပြန်အမ်းနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ၀.၀
တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် ပြန်အမ်းငွေ ရရှိရန် ကြာချိန် (ရက်သတ္တပတ်) စစ်တမ်းကောက်ယူသော မေးခွန်းများတွင် ပါရှိသော လုပ်ငန်းအား တန်ဖိုးဖြည့်အခွန် ပြန်အမ်းငွေ ပြန်အမ်းနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ၀.၀
ဝင်ငွေခွန် အခွန်စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း ရာခိုင်နှုန်း ၀-၂၄%
ဝင်ငွေခွန် အမှားပြင်ဆင်ခွင့် တောင်းခံရန် ကြာချိန် (နာရီ) ၁၀ ၈၄.၄၀
ဝင်ငွေခွန် အမှားပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် ကြာချိန် (ရက်သတ္တပတ်) ၀.၇ ၉၇.၇၇
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ စတင်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ MyCoတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် MPU Debit Card ကို အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အခွန်ပေးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ (၇) ရက်နေ့တွင် အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဉပဒေအား အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဘက်စုံလွှမ်းခြုံသော အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
လူမှုဖူလုံရေးပေးသွင်းငွေအတွက် IT စနစ်တစ်ရပ်သစ်တပ်ဆင်ရန် ကန်ထရိုက်စာချုပ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
လူမှုဖူလုံရေးဘုတ်အဖွဲ့(Social Security Board) အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှ ရလဒ်များကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး သို့ တင်ပြထားပြီး၊ SSB အနေဖြင့် သမ္မတရုံး၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲခြင်း ကာလတို အခွန်ထမ်းပြည်သူများအား အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ် မှုဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲများ (၉) ကြိမ် ကျင်းပ ပြုလုပ်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင်အာဏာခွဲဝေ သတ် မှတ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ (၂၆၁/ ၂၀၁၉)၊ အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှု ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည့် တည်ဆဲအခွန်ဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အများပြည်သူသိရှိ လိုက်နာ ကျင့်သုံးရန် သတ်မှတ်ချက် (၁/၂၀၁၉)၊ အကူး အပြောင်းကာလတွင် အခွန်စည်းကြပ်ခြင်း၊ ဒဏ်ကြေး ငွေတပ်ရိုက်ခြင်းနှင့် ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ အရေးယူ ခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အများပြည်သူသိရှိ လိုက်နာ ကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ်ချက် (၁/၂၀၂၀) ထုတ်ပြန်ထားရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပါလုပ်ငန်းစဉ် များအား ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Standard Operating Procedureများ ဆက်လက်ထုတ်ပြန်နိုင် ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် အခွန်ကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်း ကာလလတ်
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အီလက်ထရောနစ် နည်းလမ်းဖြင့် အခွန်ကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်းကို အသုံး ပြုနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော ဘက်စုံလွှမ်းခြုံသော အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် သစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ချိန်တွင် အဆိုပါအီလက်ထရောနစ် နည်းလမ်းခြင်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘက်စုံ လွှမ်းခြုံသောအခွန်စနစ် အသုံးမပြုနိုင်မီ Pilot Project အနေဖြင့် e-Filing Management System ကို ပြင်ပ နည်းပညာဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ Golden Aster Co.Ltd နှင့် ပူးပေါင်း၍ အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး စနစ်ရေးဆွဲပြီးစီးမှု အပိုင်းအလိုက် နည်းပညာဆိုင်ရာ စိစစ်အကဲဖြတ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။
အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်ခြင်း ကာလလတ်
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟို ဘဏ်၏ CBM-net ကို အသုံးပြု၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်၍ Online မှ အခွန်ပေးဆောင် နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် MPU Debit Card ကို အသုံးပြု၍ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လ မှစတင်၍ Online မှ အခွန် ပေးဆောင်နိုင်အောင်လည်း ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနသည် ၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ စတင်၍ CB ဘဏ် ၏ CB pay & Internet Banking ကိုဖြစ်စေ၊ ၂၅-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစတင်၍ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက် (AYA Bank) ၏ AYA Mobile Banking, Internet Banking နှင့် AYA Pay ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ၁၅-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ယူအေ ဘီဘဏ်လီမိတက် (UAB Bank) ၏ Sai Sai Pay ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ၂၃-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ကမ္ဘောဇဘဏ် လီမိတက် (KBZ Bank)၏ Internet Banking ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ၁၅-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစတင်၍ MAB ဘဏ်၏MAB Mobile Banking စနစ်ကို အသုံးပြု၍ အခွန်ပေးဆောင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အခွန်ထမ်းပြည်သူများအား အခွန်ပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း ကာလလတ် အခွန်ပညာပေးစာစောင်များအား ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၏ www.ird.gov.mmတွင်လည်းလွှင့်တင်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ် သက်၍ အခွန်ထမ်းပြည်သူများ၊ အများပြည်သူများအား ပြောင်းလဲမှုများကို သိရှိလိုက်နာနိုင်စေရန်အတွက် ကျင်းပဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အခွန်ပညာပေး အစီအစဉ်များ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန လက်ရှိကျင့်သုံးဆောင်ရွက် ခွန်သည် Sales Tax နှင့် VATအား ပေါင်းစည်းရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ် ပါ၍ VAT မူဝါဒပြုစုခြင်းအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စတင် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ VAT အား အကောင် အထည်ဖော်ခြင်းမပြုမီ VAT ၏ Characteristic တစ်ခု ဖြစ်သော Capital Purchases ပေါ်တွင် ပြန်အမ်းငွေပေး နိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၆/၂၀၂၀ ဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းကို ပြင်ဆင်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအား ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Capital Purchase ပေါ်တွင် ပြန်အမ်းငွေပေးနိင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းစစ်တမ်းကောက်ခံခြင်း ကာလရှည်
Capital Purchases ပေါ်တွင် Cash refunds ပေးနိုင်ရေးအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းအား ပြင်ဆင်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၆/၂၀၂၀ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကာလရှည်လုပ်ငန်းစဉ်အား ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
အီလက်ထရောနစ်နည်းစနစ်ဖြင့် ကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်း ကာလရှည်
Lot (2) e-Registration
၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် Lot (2) e-Registration Software အတွက် Data Validation ပြုလုပ်နိုင်ရန် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် Data Entry and Data Cleaning Database ဖြင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်၍ အချက်အလက်များအားတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမည့်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါ၍ Partner Associates Co., Ltd မှ လိုအပ်သည်များဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန် ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားပါသည်။လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ နည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်သော Secure Link Co., Ltd သည် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၏ နည်းပညာအဖွဲ့ဖြစ်သည့် Information Matrix Co., Ltd နှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း၍ စနစ်အားချိတ်ဆက်နိုင်မည့် API Documen- tationပြုစုပြီးMyCOစနစ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးလျက်ရှိသော Paradigm Applications နှင့် ဆက်လက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။ ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် Secure Link Co., Ltd မှ e-mail ပေးပို့မေးမြန်းထားသော၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်ရုံးခွဲများအလိုက် အကျုံးဝင်သည့်ဒေသများ၏စာရင်း၊ လုပ်ငန်းတည်နေရာပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးနောက် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည့် လုပ်ငန်းဌာနများအတွက် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များအား ၂-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
၃-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် e-Registration နှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးမြောက်မှုအခြေအနေနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို Secure Link Co., Ltd မှ တာဝန်ရှိသူများသည် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ တာဝန်ရှိသူများအားဒုတိယအကြိမ် Program Demonstrationပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Lot (2) e-Registration Software အတွက် Data Validation ပြုလုပ်နိုင်ရန် Database အားချိတ်ဆက်နိုင်မည့် User Account များနှင့် Data အချက်အလက်များအား Secure Link Co., Ltd သို့ ပေးပို့အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။
လူမှုူဖူလုံရေးအဖွဲ့၏e-Registration လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် အကျုံးဝင်ထားသည့် အာမခံအလုပ်သမားများနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက် များအားပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားမှုမရှိစေရေးအတွက် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့် ကုမ္ပဏီတို့အကြားနှစ်ဖက် သဘောတူညီချက်အနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အတွင်းရေးသတင်းအချက်အလက်အားထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်မရှိသောသဘောတူစာချုပ် (Confidentiality and Non-Disclosure Agreement (NDA)) အား Secure Link Co., Ltd နှင့် ချုပ်ဆိုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
e-Registration လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် User Acceptance Testing လုပ်ငန်းများ၊ Deployment and Training လုပ်ငန်းများ၊ Integration and Testing လုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရန် ကျန်ရှိပါသည်။
အီလက်ထရောနစ်နည်းစနစ်ဖြင့် လူမှုဖူလုံရေးထည့်ဝင်ငွေပေးသွင်းခြင်း ကာလရှည်
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ e-Contribution Software နှင့် Database ရေးဆွဲတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ CB Bank ၏ Online Payment စနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ရေး ဆွေးနွေးမည့်အစည်းအဝေးကို ၁၉-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ MPT Money နှင့် Zoom meeting အား၂၉-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ KBZ Bank နှင့် Zoom meeting အား၂-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် CBM-Net စနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များနှင့် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများသည် ၅-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် Microsoft Team ဖြင့်(Online Meeting) ပြုလုပ်၍ ညှိနှိုူင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။၁၀-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် Secure Link Co., Ltd မှ BOD အဖွဲ့အားလုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှုအခြေအနေအားရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။
e-Contribution Software နှင့် Database ရေးဆွဲတည်ဆောက်ခြင်း (Lot-3) နှင့်ပတ်သက်၍ AYA Bank နှင့် ၂၃-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ညှိနှိုူင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။Lot-3 နှင့်ပတ်သက်၍ Secure Link Co., Ltdမှ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် Program Demonstration ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးMEB ဘဏ်သို့ သွားရောက်၍ Online Payment Report အားလေ့လာဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
e-Contribution စနစ်အတွက် ငွေလက်ခံပြေစာနှင့် Format အားSecure Link Co.,Ltdသို့ ၁၃-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
e-Contribution Software and Database ရေးဆွဲတည်ဆောက်ခြင်း (Lot-3) အတွက် Program Demonstration လာရောက်ပြသပေးရန် Secure Link သို့ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်တတိယအကြိမ် အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။
လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေအား ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း ကာလရှည်
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သည် လှိုင်သာယာရုံးခွဲနှင့် ပြည်ကြီးတံခွန်ရုံးခွဲတို့တွင် EII Pilot Project ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှ‌ နိုဝင်ဘာလအထိ စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းရုံးခွဲအပြင်အခြားမြို့ (၂၂) ရုံးတွင် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထပ်မံ၍ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးစောင့်ရှောက်မှုအာမခံစနစ်ပါ အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြေလျော့ခြင်းကိုလှိုင်သာယာရုံးနှင့် ပြည်ကြီး တံခွန်ရုံးခွဲတွင်Pilot Project အဖြစ် စမ်းသပ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Pilot Project မှ ရရှိလာသည့် ရလဒ်များအရ ဖြေလျော့ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဥပဒေပြင်ဆင်မှုတွင်ထည့်သွင်းရေးဆွဲသွားရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းညွှန်းကိန်းတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အား စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။